Blockchain News 31 Ndira 2018 - Blockchain News
Blockchain News 31 Ndira 2018
Japanese mameseji Zirume Line kuti nokuparura munhu cryptocurrency Exchange
chikuru mameseji basa Japan akazivisa nhasi – Zvirongwa zvayo kutanga uye kushandisa imwe cryptocurrency Exchange, kuti akwanise mukati kwayo dzevakurukuri chikumbiro kuti ubiquitous pakati kwayo 200 miriyoni pamwedzi vanoshingaira vanoshandisa pose.
The Tokyo anotsanangura dzevakurukuri Anwendung kwakaratidza kuti yakatanga kudare kushanda pamwe Financial Services Agency (FSA) - muJapan regulator zvemari - kunyoresa uye nokuparura munhu cryptocurrency Exchange. Chikumbiro pari pasi Kudzokorora.
The mameseji Zirume wacho kutanga kupa cryptocurrency dzokutengeserana anouya murutivi pakuparurwa imwe kambani itsva rinonzi Line Financial, iyo ndichakubvunzaiwo yakawanda yokunyatsoongorora kupa rubatsiro emari vanoshandisa.
Line Financial anotevera Line raMwari kare-yakakurumbira Mobile mari kuchinjirwa uye muripo webasa Line Pay, basa zvakaita mukati Line kuti mameseji Anwendung. mu 2017, Line mubhadharo zvikamu 40 miriyoni vanozvishandisa vakanyorwa munyika yose pamwe pagore kutengeserana vhoriyamu kwazvo ¥ 450 billion ($4.1 bhiriyoni).
Bitcoin Exchange Huobi angazarura US hofisi
China-kwakavakirwa Huobi, kare mumwe nyika guru cryptocurrency exchanges, anoronga nokuparura basa muSan Francisco.
Chief Strategy Officer cai Kailong akati “Huobi ari kutarisa kukura pose… ari U.S. achava pfungwa dzedu izvozvi.”
Huobi ari kuvaka muzinda itsva munharaunda nesilicon Valley, zvinoratidza achapesana sezvo kutsanya-aifamba mumwe, maererano achimiririra kambani.
Mwedzi wapfuura, Huobi vakazivisa zvakanga partnering pamwe mubhizimisi kambani SBI Group kuti nokuparura peya cryptocurrency exchanges muJapan kuti ape Yen anotsanangura mabasa.
SBI Virtual dzeEurope uye Huobi Japan handina akazivisa chero timelines zvakasimba avo chinonyengera.
South Korea kuti gurukota rezvemari: No urongwa kurambizwe cryptocurrencies
South Korea kuti gurukota rezvemari vati hurumende haina urongwa kuvhara pasi cryptocurrency wokutengesera, welcome nhau nokuti makambani kutyira kuti masimba kuti agure China oma chiito mu ichivharira rakapotsa yesimbi platforms.
The iwedzeredzo Kim Dong-yeon neChitatu anouya sezvo vatengesi kumba uye munyika vave spooked ne dzinopesana netsinhiro vehurumende mu South Korea, guru muzinda cryptocurrency tengeserana, kuti muSeoul achironga kurambidza vemo digitaalinen yesimbi exchanges.
"Hapana chinangwa kuti kurambizwe kana kudzvinyirira cryptocurrency (musika),"Kim akati, VaGumbo hurumende pfupi basa iri waidzora exchanges.
Muedzo Seoul kwakaita chinangwa sungisa kuti screws ari pamusika nevakawanda kuonekwa sezvo opaque uye ngozi nokuda dzekuwana pose, nyika tsika kwamboita Wednesday vakazivisa akanga akasvinura pamutemo cryptocurrency wokumwe Exchange wokutengesera munokosha anenge $600 miriyoni.
"Tsika basa rave pedyo pedyo achitarisa zvisiri pamutemo wokumwe Exchange zvokutengeserana kushandisa cryptocurrency sechikamu nehurumende basa simba,"Yakati.
Maererano ezvinhu ...
Binance & LCX Kr ...
Previous Post:Kuva blockchain yokuvaka
Next Post:Sei vanoitisa ICO kuSwitzerland